Ntughari ugbu a na nke ugbu a: ọdịiche na myirịta | Ngwaike efu
Ịgbanwe ugbu a na nke ugbu a: ọdịiche na myirịta
Isaac | | mmụta, General
Ị kwesịrị ịmata ọdịiche dị n'etiti ịgbanye ọkụ ugbu a na ka ọ dị ugbu a. Ha abụọ dị ezigbo mkpa, a na -ejikwa ya ma ụlọ ọrụ mmepụta ihe yana na ọkwa ụlọ iji nye ike nke ọtụtụ ngwaọrụ. Site na igwe nrụpụta, ruo ngwa ụlọ, site na ekwentị mkpanaaka, na ndị ọzọ ihe ntanetị.
Na mgbakwunye, ị ga -amụtakwa myirịta, ebe ọ bụ na ha dị n'etiti DC na AC.
1 Gịnị bụ iyi?
2 Kedu ihe bụ direct current?
2.1 Ngwa na ntụgharị
3 Kedu ihe bụ AC?
4 DC vs AC: uru na ọghọm
4.1 Ntughari AC / DC
Gịnị bụ iyi?
una dị ugbu a ọ bụ mmụba nke ihe, ma ọ bụ iyi mmiri, ma ọ bụ ọkụ eletrik. N'ihe banyere ọkụ eletrik, ihe na -eme n'ezie bụ na enwere elektrọn na -asọgharị n'ime ime onye na -eduzi ya, ọ bụrụgodi na ahụghị ya.
Nke a ọkụ eletrik Ọ nwere ike ịbụ nke ụdị abụọ isi ...
Kedu ihe bụ direct current?
Dịka ị ga -amaworị ma ọ bụrụ na ị na -agụ blọgụ a ugboro ugboro, DC, dịkwa nkenke dị ka CC (ma ọ bụ DC na Bekee), bụ ugbu a nwere otu ntụzịaka. Nke ahụ bụ, nrugharị nke elektrọn ga -anọ na ntuziaka akọwapụtara site na onye na -eduzi n'etiti isi abụọ nwere ikike dị iche iche na ụgwọ eletrik. Ọ bụrụ na anyị ga -esere eserese ugbu a na eserese, ọ ga -apụta dị ka ahịrị na -aga n'ihu na -aga n'ihu.
Emepụtara ọkụ ọkụ ọkụ a na nke mbụ na 1800, n'ihi batrị nke onye ọka mmụta Italy Alessandro Volta mepụtara. Aghọtachaghị ụdị ọwa mmiri ugbu a nke ọma, mana ọ bụ mmezu dị mkpa. Na 1870 na mmalite nke 1880, ọkụ eletrik a malitere imepụta ọkụ eletrik, maka ọkụ ụlọ ọrụ na ụlọ mgbe emepụtara ọkụ ọkụ. Thomas Edison.
Iji gbachitere ụdị ugbu a, Edison bịara ime ihe ngosi n'ezie, na -anwa mebie Nikola Tesla, na -azọrọ na ọ dị ugbu a dị ize ndụ. Iji mee nke a, Edison bịara ime ngosipụta ọha na -eji ọkụ na -agbagharị anụmanụ dị iche iche. Ná mmalite afọ 1903, otu puku mmadụ hụrụ ka o siri gbanye ọkụ eletrik wee gbuo enyí nwere ike dị 6600 volts. Agbanyeghị, enyí a na-enyebu karọt na-egbu cyanide iji hụ na ọ nwụrụ. A kpọrọ ihe omume ndị a niile Agha nke ebili mmiri.
Ngwa na ntụgharị
Eji nwayọọ nwayọọ dochie nke a kpọmkwem, nke nwere uru ya, dịka anyị ga -ahụ. Agbanyeghị, a na -eji ya ugbu a maka arụ ọrụ nke ngwa elektrọnik, dị ka ngwa ihe nkiri, kọmputa, wdg. Ka ha niile rụọ ọrụ site na netwọkụ eletrik na -agbanwe, a na -eji ngwaọrụ nrụzi maka mgbanwe, dị ka ihe nkwụnye ọkụ ma ọ bụ ike ọkụ.
Ọ bụ ezie na alternating ugbu a polarity Ọ bụghị ihe dị oke mkpa, na ugbu a ọ bụ ihe dị ezigbo mkpa, a ga -asọpụrụ ya ma ọ bụrụ na sekit ga -arụ ọrụ nke ọma ma ọ gaghị akụrisị. Ịgbanwe polarity na DC nwere ike ịpụta mmebi enweghị ike n'ọnọdụ ụfọdụ, yabụ ị ga -akpachara anya na nke a.
Ọ bụ ya mere ọ na -ejikarị ahụkarị ọnụ ma ọ bụ eriri akara na ogwe osisi ha, ma ọ bụ agba ịmata ya. N'ozuzu, a na-eji ọbara ọbara eme ihe maka ogwe osisi dị mma (+), na oji maka adịghị mma (-). Ụfọdụ sekit DC dị mgbagwoju anya nwekwara ike ịgbakwunye agba ndị ọzọ.
Kedu ihe bụ AC?
La e nwetụ ugbu a, dị mkpụmkpụ dị ka CA (ma ọ bụ AC na Bekee), bụ ụdị ọkụ eletrik nke ịdị ukwuu ya na ntụzịaka ya na -agbanwe agbanwe n'oge okirikiri. Nke ahụ bụ ikwu, n'adịghị ka CC, nke bụ ahịrị kwụ ọtọ nke nọchiri anya eserese, n'ihe banyere nke ọzọ, a na -anọchite anya ya dị ka oscillation sinusoidal. Ọnụ ọgụgụ nke okirikiri zuru oke kwa sekọnd ga -adabere na ugboro ole okirikiri ahụ. Dịka ọmụmaatụ, na Europe anyị nwere 50 Hz, ma ọ bụ ugboro 50 kwa sekọnd, ebe na US ọ na -arụ ọrụ na 60 Hz.
Oge a ga -apụta na 1832, mgbe Pixii ga -ewepụta faịlụ alternator mbụ, igwe na -enye ọkụ, nke dabere n'ụkpụrụ Faraday. Ka oge na -aga, Pixii ga -agbakwunye ngbanwe iji mepụta ọkụ ọkụ, nke a na -ejikarị eme ihe n'oge ochie. Na 1855 e kpebisiri ike na AC dị elu karịa DC wee mechie ya.
Teknụzụ dị ugbu a nwere mepụtara na Europe, ekele maka ọrụ Guillaume Duchenne n'afọ ndị 1850. Na 1876, onye injinia Russia ga -ewepụtakwa usoro ọkụ dị ka nke Edison, mana nwere nnukwu ọkụ AC. Ụlọ ọrụ Ganz na Budapest ga -amalite imepụta akụrụngwa ọkụ dabere n'ụkpụrụ ndị a, na mgbakwunye na akụrụngwa ndị ọzọ dabere na iyi a.
Injinia Serbia na onye nrụpụta ihe Nikola Tesla, bụ otu n'ime ndị na -agbachitere nke ukwuu ugbu a megide usoro Edison. Ọ rụpụtara ma wuo moto induction nke mbụ, nke nwere ike gbanwee ike eletriki ka ọ bụrụ igwe nrụgharị. Tụkwasị na nke a, onye ọkaibe a ga -enyekwa aka ime ka sistemụ nkesa ike zuru oke na -enweghị mgbanwe na ahịrị.
Na mgbakwunye, Tesla nyochara ngwaọrụ ndị injinia Europe mepụtara onye na-agbanwe agbanwe. Ekele dịrị ya, enwere ike gbanwee ya na obere voltaji, wee si otú a mee ka ọ dị nchebe maka ụlọ, na -enweghị mkpa ọ ga -abata n'ọtụtụ emepụtara ya, ebe ọ bụ na otu ihe kacha atụ egwu bụ ihe egwu ya. Nchọpụta ndị a ga -abụ mmalite oku a Agha nke ebili mmiri.
Edebere ikike niile metụtara AC nke Nikola Tesla na ụlọ ọrụ ahụ Ọkụ eletrik Westinghouse, iji bulie isi obodo wee gaa n'ihu na oru ndị dabere n'ụdị a. Mgbe nke a gasị, mbufe mbufe nke AC agaghị ewe ogologo oge, na -ewere ọnọdụ na 1891. Nke ahụ ga -eme na Telluride (Colorado), ọnwa ole na ole ka e mesịrị na Europe, site na Lauffen ruo Frankfurt (Germany).
Ka AC meriri wee gbasaa n'ụwa niile, Thomas Edison gara n'ihu na -akwado maka ugbu a, ihe ga -efu ya ọnọdụ ya na ụlọ ọrụ. Edison eletrik (nke a na -akpọzi General Electric), nke ya onwe ya tọrọ ntọala ...
A na -eji mgbanye ọkụ maka ụlọ ọrụ na maka ụlọ, bụ nke na -aga site na ahịrị ọkụ iji weta ọkụ eletrik n'akụkụ ụwa niile. Ọ nwere ike rụọ ngwa ụlọ, moto, igwe nrụpụta, sistemụ friji, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Dịka m kwuru na mbụ, mgbe ijikọ a nkwụnye, ị naghị akpachara anya ka ị si etinye ya dịka ọ ga -arụ ọrụ n'ọnọdụ ọbụla. Nke a bụ n'ihi ebili mmiri nke ebili mmiri nke ọzọ, ebe ọ ga -agbanwe ọzọ. Agbanyeghị, maka nrụnye otụ, enwerekwa ụzọ isi amata wiwi, wdg. N'ozuzu ị nwere waya edo edo / akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke bụ ala, eriri na -acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ nke na -acha ọcha ga -anọpụ iche, aja aja ma ọ bụ oji ga -abụkwa usoro.
DC vs AC: uru na ọghọm
A ka na -eji iyi abụọ eme ihe taa, dị ka ha nwere uru na ọghọm ya. Iji maa atụ:
Igwe ọkụ dị nfe dị mfe ịgbanwe, ihe anaghị eme na nke ugbu a.
Iji gbanwee voltaji, na ịgbanye ugbu a, ị ga -ejirịrị onye na -agbanwe ọkụ, ebe ị kwesịrị ijikọ dynamos ma ọ bụ ndị na -enye ọkụ n'usoro, nke anaghị adị irè.
Enwere ike kesaa ihe dị iche iche ugbu a n'ogologo ogologo na ike dị ala ugbu a, na -efufu ntakịrị n'ụdị ụdị okpomọkụ n'ihi mmetụta Joule na mmetụta ndị ọzọ dị ka ebili mmiri ma ọ bụ hysteresis. Ọ bụ ezie na DC nwere nnukwu mfu, ọ ga -adịkwa mkpa inwe nnukwu ụlọ ọrụ ike n'akụkụ ebe a na -achọ ya.
Ntughari AC / DC
(hụ ike ọkọnọ)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » mmụta » Ịgbanwe ugbu a na nke ugbu a: ọdịiche na myirịta